I-Monkfish, enye yezona ntlanzi zinqabileyo kwaye zinomdla, ngaba uyazi? | Ngeentlanzi
Monkfish, enye yezona ntlanzi zinqabileyo kwaye zinomdla
Wakhe weva nge umonfish. Onke amalungu omyalelo abizwa ngokuba yi-pe monkfish Iifophi. Ziintlanzi ezingamathambo ezinembonakalo engaqhelekanga kwaye zihlala zoyikisa ukuzibona njengoko zingabonakali zinobuhlobo kwaphela.
Monkfish yaziwa ngokuba Enye yezona ntlanzi zimbi zikhona zinikwe inkangeleko kunye neempawu. Le ntlanzi ineempawu ezenza ukuba ikhetheke kakhulu. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge-monkfish?
1 Iimpawu ze-Monkfish
2 Indawo yokuhambisa iMonkfish
3 Ukuziphatha kweMonkfish
4 Ukutya kweMonkfish
5 Ukuveliswa kwakhona kweMonkfish
6 Ukufana kunye numahluko nge-frogfish
7 Zeziphi izoyikiso i-monkfish enazo?
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, yeyokomyalelo Iifophi. Ezi ntlanzi zihlala zinembonakalo engaqhelekanga ezenza ukuba zibe luphawu. Olu luhlu lweentlanzi lwahlulwe lwangaphantsi kwesi-5: ILophioidei, iAntennarioidei, iChaunacoidei, iOgcocephaloidei, kunye neCeratioidei.
Nangona zibizwa ngokuba zezinye zezilwanyana ezimbi ezikhoyo, i-morphology inenkcazo. Ubume bomzimba iyalungiswa ukuze iphile kubunzulu obungenakufikeleleka bolwandle. Kwinzulu yolwandle akukho kukhanya kwelanga, ngenxa yoko izondlo zinqabile. Umlo wokusinda unzima kakhulu kuba zininzi iintlobo zezilwanyana.
Ngokubhekisele kubume bomzimba wayo, inentloko ebanzi kakhulu kunye nomzimba othe tyaba obheke ngomsila. Enye yezinto ezoyikisayo ngezi ntlanzi ngamazinyo abo. Umlomo wayo umile njengesiqingatha senyanga kwaye amazinyo abukhali kwaye amile ngaphakathi. Ngokwesiqhelo banombala womzimba wabo omdaka okanye omnyama ngwevu kunye nolusu olurhabaxa, nolurhabaxa ngaphandle kwezikali.
Ngenxa yeemeko ohlala kuzo, inamathambo amancinci kwaye athambileyo evumela ukuba ivule umlomo wayo ngokwaneleyo ukuze ikwazi ukugquma ixhoba layo. Ukuthintela ukutyiwa okanye ukubeka uhlobo oluthile lokuchasana, banamava amade entloko. Zinamaphiko emqolo kunye nasemaphandleni ebekwe ngasemva komsila. Ezinye iintlobo zeemonfish zineempiko ezilungisiweyo ukuze zilungele ulwandle kwaye zikwazi ukuhamba phezu kwazo. Ubungakanani isusela kwiisentimitha ezingama-20 ukuya kwimitha enye ubude ngelixa ubunzima bu malunga neekhilogram ezingama-27-45.
Olunye lweempawu ze-monkfish ezenza ukuba lubaluleke kakhulu sisiqwenga somqolo esivelele ngaphezulu komlomo. Kubonakala ngathi yi-eriyali kwaye iyisebenzisa njengesithiyelo sokutsala ixhoba. Eli lungu kwezinye iintlobo ze-anglerfish yabasetyhini linokukhanya. Oku kungenxa yebhaktheriya ye-symbiotic ehlala kwilungu.
Indawo yokuhambisa iMonkfish
Isalathiso seMonkfish ekufumaneni iNemo
Nangona uninzi lwe-monkfish lukuLwandlekazi lweAtlantic kunye neAntarctica, kukho malunga neentlobo ezingama-300 kwihlabathi jikelele. Banokuhlala ezinzulwini ezinokufikelela kwiimitha ezili-1.600. Ezinye iintlobo zihlala emanzini angenzulu, kodwa zinqabile.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukusinda kwe-monkfish kwenziwa nzima ngenxa yendalo ehlala kuyo. Ngokusisiseko, ukunqongophala kokukhanya kokona kunciphisa umda kwezi ndawo. Ngaphandle kokukhanya kwelanga, akukho zityalo zitshintshisanayo okanye umbono ukuze ukwazi ukuhamba nokuzingela ngcono ixhoba labo.
Ezi ntlanzi zihlala zodwa. Ukuze bakwazi ukuziqhelanisa ngcono neemeko ezinzulu zolwandle, baye bakhulisa ubudlelwane be-symbiotic kunye neebhaktiriya ezihlala "kwi-eriyali" yazo. Ubudlelwane buqukethe imvisiswano apho aba babini baphumelela okuthile. Kwisandle esinye, imonfish iyazuza ekukhanyeni okubonelelwe lilungu layo ukuze ikwazi ukubona elwandle kwaye, kwelinye icala, iintsholongwane ziyakwazi ukudibanisa izinto eziyimichiza eziyimfuneko ukuze zikwazi ukukhanyisa ukukhanya, okuthi ukuba bezikude nomzimba wentlanzi yokuloba, bezingenako.
Enye into enomdla yokuba le ntlanzi inobudlelwane phakathi kwamadoda nabasetyhini. Amadoda ngokubanzi amancinci kwaye, kwiimeko ezininzi, ezi ziba liqabane lakhe lokuphazamiseka. Oku kuhlala kwenzeka xa i-anglerfish isencinci okanye ingakwazi ukudada, inokuncamathela emfazini ngokutshixiza amazinyo. Ukuba obu budlelwane bugcinwa okwexeshana, indoda iyakwazi ukudibanisa nemazi, idibanisa ulusu kunye nokuhamba kwegazi. Xa oku kusenzeka, ulahlekelwa ngamehlo kunye nezitho zangaphakathi ngaphandle kwamalungu okuzala. Yiyo loo nto ingaqhelekanga ukuba umntu obhinqileyo abe ne-6 okanye ngaphezulu kwamadoda adityaniswe emzimbeni.
Ezi ntlanzi zizilwanyana ezizezinye iintlobo zeentlanzi. Ukuze zizingele, zisebenzisa ilungu lazo elikhanyayo. Xa ixhoba linxibelelana nesithiyelo, i-anglerfish ikhawuleza ivule umlomo ize iyigqibe. Enkosi ngamathambo abo aguquguqukayo, bayakwazi ukuginya ixhoba eliphindwe kabini kubukhulu babo.
Ukuveliswa kwakhona kweMonkfish
Ngenxa yendawo emnyama abahlala kuyo kunye nobunzima bokudibana nezinye iintlanzi, kuyingxaki enkulu kwi-anglerfish ukufumana iqabane oza kutshata nalo. Ukudibana ezimbini ze-monkfish yinto engaqhelekanga. Ke ngoko, xa bevelisa kwakhona benza oko manqaphanqapha. Indoda iphila kuphela ngenjongo yokuzala kwaye xa efumene umntu obhinqileyo akathandabuzi ukudibana naye, ngaloo ndlela esiba sisidleleli endaweni yokutshintshela isidoda kwiqabane lakhe.
Nangona ingezizo zonke iimonkfish ezivelisa ngale ndlela. Kukho iintlobo ezithile ezinako ukugcina ukunamathela okwabelana ngesondo okwexeshana ngaphandle kokuxuba izicubu zazo.
Nokuba yeyiphi na indlela yokuzala kwakhona, imazi izalela elwandle kumaleko angaphakathi kunye nala selubala. Olu luhlu lunalo Ubukhulu be-25 cm ububanzi kunye neemitha ezili-10 ubude. Iqanda ngalinye lidada kwigumbi ngalinye elinendawo evulekileyo yokuba amanzi ajikeleze ngaphakathi. Xa amaqanda eqanduselwa, amawaka emibungu aqanduselwa ngamaphiko amade e-pelvic, amile okwemisontwana.
Ukufana kunye numahluko nge-frogfish
Intlanzi yentlanzi inezinto ezifanayo kunye ne-monkfish, nangona ikwahluke kakhulu. Zombini zizilwanyana ezizingelayo kwaye zinelungu elisebenza njengesithiyelo kwixhoba lazo. Umahluko phakathi kwezi zimbini kukuba Umxube weFrogfish kwindalo esingqongileyo ukuphazamisa ixhoba labo kwaye jonga ngathi ziziponji zolwandle. Ngomzimba wayo wokuloba, utsala ixhoba kwaye, njenge-monkfish, iyakwazi ukuvula umlomo wayo ubanzi kangangokuba ingaginya ixhoba elikhulu kunayo. Ngelixa i-monkfish itsalela ixhoba ngokukhanya, i-frogfish kufuneka ifihle kubo ukuze ihlasele ngokungalindelekanga.
Ilungu elisetyenziswe njengesithiyelo kukunaba komqolo okubonakala ngathi ngumbungu okanye intlanzi encinci. Ngale nto unokutsala ixhoba ngokungathi yintonga yokuloba. Umzimba wabo, ngokungafaniyo ne-monkfish, ugqunywe zii-quill, isitenxo, kunye neentsumpa ezibavumela ukuba badibane neziponji, ii-squirts zolwandle, iikhorali kunye namatye.
Omnye umahluko ekuthi i-toadfish kunye ne-monkfish zinetyhefu. I-toadfish inetyhefu yokuzikhusela kwelinye ixhoba, ukongeza ekulingiseni okusingqongileyo. Monkfish ichasene: ifuna ukutsala umdla wexhoba ukuze liye kuye.
Iintlanzi zentlanzi azinabudlelwane bokwabelana nazo naziphi na iintlobo zebhaktheriya okanye ezinye iintlobo zentlanzi.
I-Toadfish ifumaneka kwi Imimandla ekweleenjiko kunye neyobushushu yeAtlantic kunye nePacific, uLwandlekazi lwaseIndiya kunye noLwandle Olubomvu. Ezi ntlobo azihlali nzulu njengolwandle njenge monkfish.
Zeziphi izoyikiso i-monkfish enazo?
Sisahlala enzulwini yolwandle kwaye malunga ne-1.600 yeemitha ubunzulu, I-monkfish isongelwa ngabantu. Nangona enye yezona ntlanzi zimbi emhlabeni, ayisiyiyo le nto itsala abantu, kodwa kukungcamla kunye nencasa yabo. I-Monkfish ixhaphake kwizitya ezenziwe ngenyama yayo. Ukongeza, kwiindawo ezinje ngeJapan kunye neKorea zithathwa njengesiqhelo ukuba kufanelekile ukuzama.
Imonfishfish yaseMelika (Lophius americanus) kunye ne-anglerfish enebhanti emnyama ibandakanyiwe kuLuhlu oluBomvu lweeNdidi zokuLoba zaseGreenpeace, ezibonisa iintlanzi ezithengiswa kwihlabathi liphela ezinamathuba aphezulu okuvela kwiindawo zokuloba ezingazinzanga. Ukongeza ukuloba ngokugqithileyo, i-monkfish nayo isongelwa kwindalo engqongileyo. Ngexesha lesenzeko El Niño Qubha ngaphezulu kwaye emva koko inani elikhulu leentlanzi ezifileyo zibonwa zidada. Oku kubangelwe kukutshintsha kwamaqondo obushushu bamanzi. Okwangoku, ukuloba ngokugqithisileyo kwezi ntlanzi kunye nefuthe lotshintsho lwemozulu olubangela ukwanda kwamaqondo obushushu bamanzi kunye neasidi yolwandle, zisongela imonkfish.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukwazi okungakumbi malunga neentlanzi, nangona zimbi kakhulu ngaphandle, ziyakwazi ukuziqhelanisa kwaye zisinde kwiindawo ezinobutshaba kwaye, ukongeza, incasa yazo ifunwa kakhulu kumazwe amaninzi apho ubumnandi bokungcamla inyama yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Monkfish, enye yezona ntlanzi zinqabileyo kwaye zinomdla
UPablo Fernández sitsho
Wow, inqaku elimangalisayo!
Phendula Pablo Fernández
Eyona ntlanzi inkulu engenamanzi ehlabathini